Press Announcements » နှစ်ဘ၀ နှစ်ကန္တာ	46
ကထူးဆန်း says: Congratulation ပါ ဆရာမ ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ထုတ်ဝေရေး အဆင်ပြေသွားတာ ဒီရွာရဲ့ကျေးဇူးပါ ကထူးဆန်းရေ။
ခင်ဇော် says: အားပေးမှာပေါ့ ကိုယ့်အမ!!
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . အပြောမကြီးနဲ့ဦးလေ ဦးလေးခင်ဇော် ။ ၀တ္ထုကို ဖတ်ပြီးရင် ဘာသာပြန်သမားကို ရိုက်သတ်ချင်စိတ်ပေါက်မှာ ကြောက်ရတယ်။ စာအုပ်ထွက်တာ ၄ရက်ပဲ ရှိသေးတော့ review မထွက်သေးဘူး။ ဘယ်လိုတွေ လာဦးမလဲ မသိဘူး။ ဒီစာအုပ်ဟာ မြစ်တစ်စင်းကို အခြေပြုပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ မျိုးချစ်စိတ်၊ စတာတွေကို အားပြိုင်ရေးထားတာ။ ဒီကနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပုံရိပ်။ တစိမ့်စိမ့် အချိန်ယူဖတ်ရမှာ။ အမရေးခဲ့သမျှတွေထဲမှာ ဘူဒင်ပြီးရင် ဒါကို လက်အတွေ့ဆုံးပါ။ ဘယ်လိုဝယ်ဖတ်မလဲ။ ရန်ကုန်ကို ဘယ်လိုမှာမလဲ။ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးနော်။ စာအုပ်က ထူတယ်။
kai says: ဝေဖန်ရေးဆရာ.. ဆရာမောင်စွမ်းရည်ဆီ.. စာအုပ်ပို့ပေးရမလိုဖြစ်နေပြီ..
Alinsett@Maung Thura says: ပြုံးမမပြီးတော့… ဂျူးအန်တီကို ရွာထဲ ဆွဲခေါ်ဖို့..ချောင်းနေပါကြောင်း…
ခရီးထွက်ပြီး…စာသွားရေးတယ်လို့…သူ့ အိမ်သားတစ်ယောက်က ပြောလို့… Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဗျို့ သဂျီး။ သဂျီး ဗေဒင်ယုံတယ်ဆို။ မျှစ်ကြော် ငယ်တုန်းက ကိုင်ရိုရဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်ဆိုတာ တွက်ကြည့်သေးတယ်။ ထွက်လာတဲ့အဖြေက သေပြီးမှ နာမည်တဟုန်ထိုးကြီးမယ်တဲ့။ အဲတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ မြန်မြန်သေပစ်လိုက်ရမလား။
Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: ဗေဒင်ကိုယုံတယ်.. ဗေဒင်ဆရာတွေကိုတော့ မယုံဘူးဗျ…။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အားပေးမယ်နော် အစ်မ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သော်သော်ရေ လက်ကျန်စာအုပ်က ၃ ရက်နဲ့ပြတ်သွားပြီ။ ၃ရက်နဲ့ ဘက်စဲလားစာရင်းတော့ ၀င်သွားပြီ။ အမလည်း အဲဒီသတင်း ရန်ကုန်က ဖုန်းဝင်လာမှပဲ အလုံးကြီးကျရတော့တာ။ စာအုပ်မထွက်ခင်ကော၊ ထွက်ပြီးမှာရော သိပ်ကို အားတင်းထားရတယ်။ သတင်းကောင်းမရရင် လူက ပရမ်းပတာ ဖြစ်သွားတာ။ အမတို့က ကိုယ့်စာအုပ်ကိုယ်ထုတ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဆွေစပ်မျိုးစပ်လည်း မရှိဘူး။ ထုတ်ဝေသူ သူစိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ရတာဆိုတော့ စာအုပ်မစွံဘူးဆိုရင် ကိုယ်က အောက်ကျပါလေရော။
padonmar says: မှတ်မိသေးတယ်၊
naywoon ni says: ဘာသာပြန်​ဆိုတာက ကျ​နော်​တို့လို တစ်​ဘာသာ​တောင်​ အနိုင်​နိုင်​ ​ပြောဆို​ရေး​နေကြရသူ​တွေအတွက်​ပြူတင်း​ပေါက်​​ တစ်​​ပေါက်​ပါပဲ ။ အရင်​က​တော့ ဘာသာပြန်​က ကဗျာနဲ့ ၀တ္ထုပဲ ရှိခဲ့တာ ကလား ။ ခု​တော့ တစိမျိုးထပ်​တိုး​နေဘီ ။ ဘာသာပြန်​ရုပ်​ရှင်​တဲ့ ။ ​နောက်​ဆက်​လက်​ပြီး ဘာသာပြန်​ စာအုပ်​​တွေ ထွက်​နိုင်​ပါ​စေဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကဗျာ ဘာသာပြန်မှာကတော့ ဆရာမောင်သာနိုး လက်ကို မှီသူမရှိသေးဘူးလို့ ကျမထင်တယ်။ ဆရာမြ တို့၊ ဆရာနတ်တို့ ကွယ်လွန်သွားတော့ ရသဘာသာပြန် ဘာဖြစ်သွားမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ လင်းယုန်ကြီးတို့ရယ်၊ သတင်းပိုင်းမှာ ဆရာမောင်ဝံသ ရယ်။ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ကွယ်လွန်ကုန်တော့ အခုထိ ဘာသာပြန်လောက နာလံမထူသေးဘူး။
naywoon ni says: ဟုတ်​ ​မောင်​သာနိုးကို​တော့ ဘယ်​သူမှ မလိုက်​နိုင်​​သေးဘူး ထင်​တာပဲ ။ သူ့စာအုပ်​​တွေထဲက “ထင်းရူးပင်​ရိပ်​ ” က ကျ​နော့ အနားမှာချထားတဲ့ စာအုပ်​ ။ တစ်​ခါတစ်​​လေ ကိုယ့်​ အ​တွေးအ​ခေါ်​တွေက ၁၉ ရာစု ​လောက်​မှာပဲ ကျန်​ကျန်​​နေခဲ့သလားထင်​မိ ။ အဲ့​နောက်​ပိုင်း ဆရာမြသန်းတင့်​ ရဲ့ ဇီမာလမ်းဆုံ နဲ့ ကဗျာရှည်​သုံးပုဒ်​ ။ အတတ်​ပညာပိုင်းကျ​တော့ ဆရာ​ဇော်​​ဇော်​​အောင်​ ။ လိုက်​မမှီဘူး ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ရွာကို ချစ်ပါတယ် တီဒုံရေ။ ရွာထဲမှာ ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျမက hardliner ဖြစ်နေတော့ စကားပြောအစွန်းရောက်တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါကို ရွာသူရွာသားတွေက လျှော့လျှော့ ပေါ့ပေါ့ ဆက်ဆံပေးခဲ့ကြတာတွေ ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ ကွန်မင့်လည်း မှန်မှန် ပြန်မဖြေတတ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ရွာသူရွာသားတွေ သီး ခံပေးကြတာပါပဲ။
Alinsett@Maung Thura says: တိမ်ယံသစ္စာကို ကျနော် ဒီရွာထဲ အပိုင်းဆက်နဲ့ မတင်ခင်
စာအုပ် အညွှန်းလေး ရေးတင်ခဲ့မိတာာာာက စတယ်ဆိုပါတော့… (ကျနော့် စိတ်ထဲ အဲ့ဒီ ဆောင်းညရှိုက်သံကို အတော် စွဲထင်နေတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အလက်ဇင်းရေ
kai says: အလက်ဆင်းရေ..
Alinsett@Maung Thura says: ဖတ်ညွှန်းလေး ရေးတော့ ရေးချင်သား
Foreign Resident says: ” ဒီ စာအုပ်ဟာ မြစ်တစ်စင်းကို အခြေပြုပြီး
Ma Ma says: ပြုံးရေ ………
Mr. MarGa says: ကုန်ပြီ ဆိုတော့
Kaung Kin Pyar says: Congratulation လို့ အရင်ပြောပါရစေ မ၀င့်ပြုံးမြင့်ရေ….။
Mike says: .” သော်သော်ရေ လက်ကျန်စာအုပ်က ၃ ရက်နဲ့ပြတ်သွားပြီ။
.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မ၀င့်ပြုံး အောင်မြင်တာအတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဂုဏ်ယူပါတယ် အစ်မရေ… 1984 ကို အာတီဒုံဆီက ငှားယူထားပြီး အခုထက်ထိ မဖတ်ဖြစ်သေးတာ တောင်းပန်ပါတယ်… ဒီလကုန်ရင်တော့ လူရော စိတ်ရော အားပြီမို့လို့ စာတွေ ပြန်ဖတ်နိုင်ပြီ ထင်ပါရဲ့… ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားပေးပါဦးနော်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မွန်မွန်ရေ ၁၉၈၄ က အနောက်မှာ ပြဌာန်းတဲ့စာအုပ်ဆိုတော့ ဖတ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ ၁၉၈၄ ထဲက အယူအဆတွေကို အမကိုယ်တိုင်တောင် လက်သင့်မခံနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို သက်သေပြတဲ့ စာအုပ် ရှေ့လမှာ ထွက်ပါမယ်။ မိဘမဲ့တိုင်းပြည် ပါ။ အဲဒီ မိဘမဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်း အခု သင်ရိုးထဲထည့်ကြ တော့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တက္ကသိုလ်မှာ ဖတ်ပြီးဆွေးနွေးတာ လုပ်ကြတော့မယ်လို့ သိရတယ်။ မိဘမဲ့တိုင်းပြည်က ၂၀၁၄ ရဲ့ ပူလစ်ဇာဆုရစာအုပ်ကို ပြန်တာပါ။ ၂၀၁၄ တစ်နှစ်လုံးမှာ စာအုပ်ကောင်းကောင်း သိပ်မထွက်ဘူး။ တစ်အုပ်တည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးထွက်ခဲ့တာကတော့ အဲဒီစာအုပ် ပါပဲ။ မူရင်းစာအုပ်နာမည်က Orphan master’s son ပါ။
lu lu says: လေးစားအားကျမိပါတယ် အန်တီးဝင့်ပြုံးမြင့်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .စာအုပ်က တောင်ကြီးထိ ရောက်ပါ့မလား မသိဘူး လုလုရေ။
ဦးကျောက်ခဲ says: Congratulation ပါ မျှစ်ရေ… ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အန် … ကျောက်စ်ဂျူ နီယာက ၄လပိုင်းမှာ မွေးမှာဆို။ အခု စောနေလား။ ကလေးရော မိခင်ရော နေကောင်း တယ်မဟုတ်လား။ မနှင်းကိုလည်း ၀မ်းသာကြောင်း ပြောပေးပါနော်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ..နှစ်ဘဝ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အန်ကယ်ကြောင်ရေ ရသစာပေ မဖတ်ဘူးဆို။ ခေါင်းထဲကို တကယ်သွင်းလိုက်နိုင်တာဟာ အချက်အလက်တွေ မဟုတ်ဘူး။ ရသနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာသာ ခေါင်းထဲ ၀င်သွားတာ။ ဒီစာအုပ်လေးတော့ ဘီဘီလေး ဘေးချပြီး ဖတ်နော်။ တကယ်အရသာရှိပါတယ်။
Ma Ei says: ၀ယ်ဖတ်ကြည့်ပါမယ် ပြုံးရေ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကျေးဇူးပါ မွအိ၊ ဖတ်ပြီးရင် ဝေဖန်ပေးပါဦးနော်။
တောတွင်းပျော် says: ဆရာမ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အလို ဘယ်တောထဲကို ရောက်နေတာတုန်း။ တောခိုနေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ သခင်သန်းထွန်းစာအုပ်က လွှမ်းမိုးမှုကြီးတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်မယ့်အချိန် အလင်းဆက်ကို ပြောထားနော်။ သူကနေတဆင့် ဆက်သွယ်ရင် လွယ်ပါတယ်။ နောက်အုပ်တွေ ထွက်ဦးမှာ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးလည်း အရမ်းတင်တယ်။ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ဖြစ်နေတာ။ ဒီအကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် အမမှာ ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီရွာထဲက ကိုဘလှိုင်လည်း တကယ့်ဘာသာပြန် ပါရမီရှင်၊ တကယ်ပြောတာ။ သူ့စာအုပ်တွေ မထွက်နိုင်တာ စာအုပ်ထူလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါဆို ထုတ်ဝေတိုက်တွေ အရှုံးပေါ်ဖို့များလို့ မထုတ်ကြသေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
koyinmaung says: ဆရာမရေ…ရွာထဲ ခုမှပြန်ဝင်ဖြစ်တယ်၊ ဆရာမစာအုပ်တွေ ၀ယ်ယူအားပေးပါ့မယ်…..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဆရာမလို့ မခေါ်နဲ့လေ။ သမီးက ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာကို။ မျှစ်ကြော် ခေါ်ရင်
ခင်ဇော် says: အာ့အကြောင်းလေး စိတ်ဝင်စားတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မျှစ်ကြော်ကိုကော ကြိုက်လား။ လူကိုပြောတာနော်။ တဆိတ်ရှိ စားဖို့ပဲ မစဉ်းစားနဲ့။
ခင်ဇော် says: လူလည်းကြိုက်တယ်။
Alinn Z says: ဒီပိုစ့်ကို ဒါလေးနဲ့ တွဲပြီးဖက်ရင် ပိုကောင်းမယ်…
Alinn Z says: စာအုပ်အညွှန်းနှင့် စာရေးသူအား မေးမြန်းခြင်း – Alinn Z
ဆရာမ ဝင်ပြုံးမြင့်၏ အဖြေများကို ဤ လင့်ခ် http://mandalaygazette.com/212824 တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်းးးးး
kotun winlatt says: ဂုဏ်ယူပါတယ် ဆရာမရေ မန်းလေးရောက်ရင် စာအုပ်ဆိုင်မှာ ရှာဝယ်ပြီး ဖတ်ပါ့မယ်။ ဘာသာပြန်ထဲကဆိုရင် ဂျက်လန်ဒန်ရဲ့ ဝတ္ထုတွေ ကြိုက်တယ် ပင်လယ်ဝံပုလွေ | စွမ်းသူ့အားမာန်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မန်းလေးမှာ ဆိုရင် ထွန်းဦးတိုက်မှာ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျမလည်း ဂျက်လန်ဒန် အကြိုက်ဆုံး ငယ်တုန်းကပေါ့။ အားရင်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာ စိတ်အေးလက်အေး စာဖတ်ချိန်ဆိုတာ ရှားသွားပါပြီ။ အမြဲတမ်း ဖုတ်ပူမီးတိုက်ဖတ်၊ ဘာသာပြန်ရင်လည်း တဖြည်းဖြည်း လက်ရည်ကျလာ။ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရင်းနဲ့ ပိုတတ်လာတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကြောင့် ဘာသာပြန်တာ ပိုကောင်းလာရင်လည်း အနုပညာပိုင်း လျော့သွားရင် အဲဒီစာအုပ် ဖတ်လို့ကိုမကောင်းဘူး။ ကျမ အဲဒီလို ဖြစ်လာတယ်။